Amathiphu we-Web Scraping kusuka ku-Semalt
Umkhiqizo womkhiqizo ufanelekile kwiwebhusayithi ye-e-commerce kanye nokwaziswa okuvela ku-BestBuy, i-Walmart, i-eBay, i-Target ne-Amazon njengamawebhusayithi - business value appraisal. Leli thuluzi lisinikeza ulwazi olunembile mayelana nomkhiqizo kufaka isihloko sayo, incazelo, isithombe, kanye nentengo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo we-Product scraper une-API elula ukuyisebenzisa futhi ungahlanganiswa nanoma isiphi isiphequluli sewebhu ngokushelela.
Umkhiqizo womkhiqizo njengethuluzi elifanele lokukhipha idatha:
Uma usanda kusungula iwebhusayithi ye-e-commerce, ungase ufune ukuqoqa ulwazi mayelana nabancintisana nabathengi bakho, imikhiqizo yabo, amanani, nezithombe. Ungakwazi ukuqhathanisa kalula izindawo ezahlukene ze-e-commerce ezifana ne-Amazon, i-Walmart, ne-eBay futhi uthole ulwazi oluwusizo usebenzisa uMkhiqizo Scraper. Leli thuluzi lihlukile ngoba lisisiza ukuqhathanisa izindawo ezahlukene ze-e-commerce, thola uhlu lwazo lomkhiqizo, izithombe, ukubuyekezwa, kanye nolwazi lwamanani. Ngokungafani namanye amathuluzi avamile, umkhiqizo we-product scraper uthola idatha ngokukhasaza futhi uqhathanisa amakhasi ewebhu ahlukene ku-intanethi bese uthola imininingwane mayelana nabathengisi nabaphakeli. Ngakho-ke, singasho ukuthi uMkhiqizo we-Product Scraper ungumgogodla wewebhusayithi ye-e-commerce.
Sebenzisa umkhiqizo wokukhipha umkhiqizo ukuze uqaphe amanani nezisebenzi zokuncintisana:
Ukuthengisa imikhiqizo ehlukene inthanethi ngamanani okuncintisana kuye kwaba yinselele kithi sonke. Ngezinye izikhathi abasebenzisi badideka ngamanani aguqukayo emikhiqizo ehlukene kwi-inthanethi. I-Amazon ne-eBay zizama ukugcina amanani ezingeni elihle futhi ihlose ukuheha amakhasimende amaningi. Ukuze uqale, ukuthola ulwazi lomkhiqizo kubaluleke kakhulu. With Product Scraper, kuzoba lula kuwe ukuqhathanisa amanani wemikhiqizo ehlukene futhi ukwandisa iwebhusayithi yakho ngendlela engcono. Isibonelo, uma ufuna ukukhipha idatha kusuka ezinkundleni zokuhamba noma ezinkampanini ze-e-commerce, kufanele uzame umkhiqizo we-Product instantly. Leli thuluzi lizokuqoqa, lihlele futhi likukhiphe idatha ngesikhathi sangempela.
Sebenzisa umkhiqizo womkhiqizo ukuhlola izitayela zemakethe:
amasayithi e-commerce kanye namabhizinisi ase-intanethi aqapha njalo abalingani bawo. Isibonelo, i-Amazon igcina iso emakethe amanje emakethe futhi iqoqa ulwazi mayelana nemikhiqizo namasevisi we-BestBuy ne-Walmart. Ngaphezu kwalokho, liqhathanisa amanani abo kanye nemikhiqizo ngebanga lalo. Umkhiqizo womkhiqizo uzokuthola uhlobo olufanayo lwolwazi. Leli thuluzi lizosiza ukuthola ulwazi olunokusebenza futhi luzokuthola idatha ekhishwe kahle yebhizinisi lakho. Ngaphandle kwalokho, izohlinzeka ngolwazi mayelana nokuthi abancintisana bakho bathumela kanjani imikhiqizo yabo nokuthi hlobo luni lwesaphulelo lunikezwa ku-intanethi.
Umkhiqizo omncane uthola ulwazi olunembile mayelana nabanikezeli:
amawebhusayithi e-e-commerce kanye nezimakethe anezinkulungwane zabahlinzeki abakhuthele. With Product Scraper, ungakwazi ukuqoqa ulwazi mayelana nabahlinzeki abaningi futhi ungaqhathanisa imikhiqizo yabo namanani. Ungaphinda udonse idatha esuka ku-Amazon nase-eBay futhi ungakhaza amakhasi akho wewebhu ngendlela efanele. Abathuthukisi bewebhu nabahlelo bangakha amaseva angaguquki ngomkhiqizo wokuhlunga futhi angenza imisebenzi eminingi kalula.